ဦးနှောက်ခွဲစိတ်လူနာတွေကိုအကဲမှတစ်ဦး Cooler Way ကို - သတင်း Rule
ဦးနှောက်ခွဲစိတ်လူနာတွေကိုအကဲမှတစ်ဦး Cooler Way ကို
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဦးနှောက်ကိုခွဲစိတ်လူနာတွေအကဲဖြတ်ဖို့အေးလမ်း” မို Costandi ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 26 ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 09.30 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အ U.S အတွက်သုတေသီများ. မြေပုံနှင့် neurosurgery ခံရဖို့အကြောင်းသတိလူနာအတွက်ဦးနှောက်ကို function ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဘို့သစ်တစ်ခုနှင့်တိုးတက်လာသောနည်းပညာကိုတီထွင်ခဲ့ကြ - သေးငယ်တဲ့အေးအားဖြင့်, ယာယီသူတို့ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကြားဖြတ်နှင့်စကားလုံးဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောဒေသများနှင့်မိန့်ခွန်း၏အချိန်ကိုက် map မှကွက်ဦးနှောက်ဒေသများ. သူတို့ကသူတို့ရဲ့နည်းလမ်းကိုဖော်ပြရန်, နှင့်ပြောပြီဘာသာစကား၏ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံဦးနှောက်ယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုဘယ်လိုရှင်းပြပါ, ရုံဂျာနယ်ထုတ်ဝေနေတဲ့လေ့လာမှုအသစ်အတွက် အာရုံခံဆဲလျ.
ကျန်ကြွင်းသောလူအကြောင်းကိုပုံပြင် နိုးကြား စဉ်အတွင်း ဦးနှောက်ခွဲစိတ်မှု အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာမှန်မှန်ပေါ်လာ. တွင် 2008, ဥပမာအားဖြင့်, မျိုးစုံကိုသတင်းဆိုင်များတွင်ကြောင်းဒဏ္ဍာရီရိုးရာကျေးလက်တေးဂီတဂီတပညာရှင်ဖော်ပြခဲ့သည် Eddie Adcock သတိကျန်ရစ်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်း မိမိအ banjo ကစား, တစ်ဦးကိုလက်တုန်ခါဆက်ဆံဖို့သုံး-and တစ်နှစ်ခွဲစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်း. ထိုအခါပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်း, စပိန်, jazz ဂီတပညာရှင်အကြောင်းကိုအလားတူအစီရင်ခံစာများရှိကြ၏ ကားလို့စ် Aguilera, အဘယ်သူသည် မိမိအ saxophone ကစား ဦးနှောက်အကျိတ်ကိုဖယ်ရှားမယ့် 12 နာရီစစ်ဆင်ရေးတစ်လျှောက်လုံး.
Related: Sudoku-သွေးဆောင် epileptic သိမ်းယူမှု
ထိုသို့သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုမကြာခဏအံ့သြစရာ "အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်,"" တော်လှန်ရေးသမား,"နှင့်, တခါတလေ, "အံ့ဖွယ်။ " တကယ်တော့, ခွဲစိတ်နီးပါးတရာနှစ်ပေါင်းသတိလူနာများ၏ဦးနှောက်အပေါ် operating ပြီ: အဆိုပါနည်းလမ်းရှေ့ဆောင်ကနေဒါ neurosurgeon အားဖြင့် 1920 ခုနှစ်တွင်တီထွင်ခဲ့သည် Wilder Penfield, epileptic သိမ်းယူမှုများသည်ဖြစ်စေတဲ့အပုံမှန်မဟုတ်သောဦးနှောက်တစ်သျှူးတည်နေရာတစ်လမ်းအဖြစ်.
Penfield ကသူ့လူနာတွေကို '' ဦးနှောက်၏မျက်နှာပြင်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့လျှပ်အသုံးပြု, သူတို့နောက်ကျောကသူ့ကိုရန်ဆွ၏သက်ရောက်မှုသတင်းပို့နိုင်အောင်နှင့်တမင်တကာခွဲစိတ်စဉ်ကာလအတွင်းသူတို့ကိုနိုးထားရှိမည်. ထိုပုံမှန်မဟုတ်သောတစ်ရှူးပတ်လည်ဒေသတွေကိုနှိုးဆွခြင်းအားဖြင့်, လည်းမိန့်ခွန်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကဲ့သို့အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်အလွန်အရေးပါဖြစ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများ၏သောအဆုံးအဖြတ်စဉ်သူသည်သိမ်းယူမှုများသည်ဖြစ်စေတဲ့တစ်သျှူးခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်. ဒီလမ်း, သူမဆိုအာမခံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမရှိဘဲပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တစ်ရှူးကိုဖယ်ရှားနိုင်.
cortical ဆွ၏ Penfield ရဲ့ method ကိုယနေ့ကျယ်ပြန့်နေဆဲအသုံးပြုသည်ပေမယ်, အတန်ငယ်ရီစရာ, ကိုယ်တိုင်က epileptic သိမ်းယူမှုများသည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်. အသစ်နည်းလမ်းမရှိထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်သယ်ဆောင်. ကတီထွင် မိုက်ကယ် Long က နယူးယောက်တက္ကသိုလ် Langone Medical Center မှနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ, ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အစောပိုင်းကနည်းလမ်းအပေါ်တည်ဆောက် စုံစမ်းစစ်ဆေးအေး တာဝန်ရှိသည်ဦးနှောက် circuitry လေ့လာဖို့ မြင်းကျား Finch ၌သီချင်းဆိုထုတ်လုပ်မှု.
Long ကနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အပေါ်အလားတူအအေး device ကိုအသုံးပြု 16 သူတို့ရဲ့ဆေးယဉ်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါဆက်ဆံဖို့ neurosurgical စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အကဲဖြတ်ခံလူနာ. ဒေသခံထုံဆေးအောက်မှာလူနာနှင့်အတူ, သုတေသီအအေး device ကိုအသုံးပြု 42 discrete ဦးနှောက်ဒေသများ, ယခင်ကမိန့်ခွန်းထုတ်လုပ်မှုပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီအားလုံးသော, အကြောင်းအားဖြင့် 10°C ကိုအသီးအသီး. ဤအတောအတွင်း, လူနာထိုရက်သတ္တပတ်၏လက်ထက်၌ရွတ်ဆိုဖို့တောင်းခဲ့ကြ, သို့မဟုတ်နံပါတ်များရိုးရှင်းတဲ့ string ကို, ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီဒေသအအေးနေစဉ်သူတို့ရဲ့မိန့်ခွန်း function ကိုအကဲဖြတ်နိုင်.
အအေးဆယ်လူလာလှုပ်ရှားမှု interrupts, နှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်, သုတေသီကပြောဆိုရန်လူနာ '' စွမ်းရည်ကိုအတူဝငျရောကျစှကျကြောင်းတွေ့ရှိ, သူတို့ရဲ့မိန့်ခွန်းနှေးကွေးခြင်းနှင့်မှုန်ဝါးစေရန်. ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာယာယီခဲ့သည်, သို့သော် - ဦးနှောက် function ကိုအအေး device ကိုဦးနှောက်ထဲကနေဖယ်ရှားခဲ့သည်ချက်ချင်းပြီးနောက်ပုံမှန်ပြန်လာသော, လူအပေါင်းတို့သည် 16 နောက်ပိုင်းတွင်မည်သည့်ဖွယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသို့မဟုတ်အခြားရောဂါများမပါဘဲ၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေးမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လူနာ.
Related: ကပ်သီးကပ်ကြိုးမဲ့ sensor များကဦးနှောက်ဒဏ်ရာစောင့်ကြည့်
ရလဒ်မိန့်ခွန်းထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်အများအားဖြင့်လက်ဝဲကမ္ဘာခြမ်းဘက်တွင်ဖြစ်ကြောင်းအစောပိုင်းကတွေ့ရှိချက်ကိုအတည်ပြုဖို့, သူတို့ကလည်းဦးနှောက်မိန့်ခွန်းကိုထုတ်လုပ်ပုံကိုသို့အသိအမြင်အသစ်များကို. အထူးသ, လူနာ '' မိန့်ခွန်း၏အရည်အသွေးပြောင်းလဲလက်ဝဲမော်တာ cortex ၏တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အစိတ်အပိုင်းအေး, ၏အေးသော်လည်း Broca ရဲ့ဧရိယာ သူတို့ရဲ့မိန့်ခွန်း၏အချိန်ကိုက်ပြောင်းလဲလက်ဝဲယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက်.
ဤရွေ့ကားရလဒ်များမော်တာ cortex မိန့်ခွန်းထုတ်ဖေါ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောနှုတ်ခမ်းနှင့်သောလျှာသည်အတွက်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုညွှန်ကြားကွောငျးဖျောပွသ, Broca ရဲ့ဧရိယာဟာသူတို့ရဲ့သငျ့လျြောသော sequence ကိုတွင်ဤလှုပ်ရှားမှုကွပ်မျက်ဘို့လိုအပ်သော်လည်း.
"ဒီလေ့လာမှုအအေး neurosurgery စဉ်အတွင်းအရေးကြီးသောဦးနှောက်စင်တာများကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏လုံခြုံနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းကြောင်းအတည်ပြု," ကပြောပါတယ် ရှည်လျားသော. "[ဒါဟာ] လည်းကိုယ်စားပြု[s ကို] စကားလုံးမြားဖွဲ့စည်းရန်ကျွန်တော်တို့ကို enable သောဦးနှောက်၏ဒေသများအားဖြင့်ကစားသည့်အခန်းကဏ္ဍ၏ဥာဏ်အတွက်အဓိကကြိုတင်မဲ။ "
ရှည်လျားသော, M က. အေ, et al. (2016). မိန့်ခွန်းအချိန်နှင့်ပီသသောအခွခေံမှာ cortical နေရာများ၏ functional ခွဲခြားမှု. အာရုံခံဆဲလျ 89: 1-7. Doi: 10.1016/j.neuron.2016.01.032 [ြဒပ်မဲ့သော]
24682	4 အပိုဒ်, Blogposts, ဆေး, mo Costandi, Neurophilosophy, neuroscience, သိပ္ပံ, သိပ္ပံဘလော့ဂ်ကွန်ယက်ကို
← ဒီအလုပျ၏အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်? အကောင်းဆုံးအာကာသ Selfies [RANKER] →